Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan 90 -maadkii | I sii wakhti firaaqo
Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan 90 -maadkii
Asxaabtu waa mid ka mid ah taxanayaasha aadka loo amaanay ee 90 -meeyadii
Haddii aad ka mid tahay jiilka kunka sano, hubaal waad weyn tahay u hiloobay 90kii. Ma jirin WhatsApp, Facetime oo aan la xusin Netflix iyo aaladaha kale ee qulqulka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku kortay wakhtigaas, waxaa hubaal ah inaad dhegeysatay muusigga Gabdhaha Spice iyo Backstreet Boys; Waxa kale oo aad dareentay moodooyinka midabada leh ee dahabka, dharka, iyo qalabka timaha. Emojis ayaa markii ugu horreysay soo muuqday muuqaalkooda yar! Waxay ahayd wax aad moodo in la akhriyo majaladaha oo toddobaad kasta la sugo cutubka cusub ee bandhigga aad ugu jeceshahay. Sababtuna waa taas Maqaalkan waxaan ku xushmeyneynaa qaar ka mid ah taxanaha telefishanka ugu wanaagsan 90 -maadkii.
Iyada oo leh teknolojiyaddii aan maanta haysanno oo dhan, waxaan mar kale ku arki karnaa madal kasta. Ku raaxayso socodkan waqtigeeda!
1 Amiirka Bel Air
2 Xaaladaha Degdegga ah
4 Sabrina, alaabtii sixirka
6 Dareenka Nolosha (90210)
7 Mudane Bean
8 Baywatch -ka
9 Walaalaha walax
10 Qof walba wuxuu rabaa Raymond
11 Guri xanaaqsan
12 Faylka X
Amiirka Bel Air
Taxanaha Mareykanka wuxuu soo baxay 1990 ilaa 1996; 6 xilli ayaa la soo saaray wadar ahaan 148 qaybood. Jilaaga caanka ah waa Will Smith, oo markaas ahaa 22 jir. Goobtu waxay ku taal a Wiil ka yimid Philadelphia oo loo diro inuu la noolaado qaraabada hodanka ah markay codsato hooyadiis.
Jilaahu waa nin dhallinyaro ah oo aan dan ka lahayn, wuxuu u isticmaali jiray inuu u noolaado si deggan, "kufsi" iyo ciyaaro kubbadda kolayga wakhtigiisa firaaqada ah. Markuu u guuro Bel Air isaga iyo adeeradiis saamaynta leh, wuxuu la nool yahay afar afarta ilmaadeer oo leh caadooyin, kuwaas oo noloshiisa u rogay caadooyin aad u kala duwan. Waqtigaas, waxay ahayd mid ka mid ah bandhigyada oo leh dhagaystayaasha ugu sarreeya waxayna calaamad u ahayd bilowga xirfadda weyn ee Will Smith.
Riwaayadda Ameerika waxay xuddun u ahayd kiisaska xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka. Waxay u sheegeysaa nolosha iyo kooxda shaqsi ahaaneed iyo xirfadleyda isbitaal mala -awaal ah oo ku yaal magaalada Chicago waxayna qaabilaan bukaannada qaba xaalado aan caadi ahayn oo ay u baahan yihiin inay isla markiiba xalliyaan si loo badbaadiyo nolosha bukaannadooda. George Clooney wuxuu ka mid ahaa kooxdii dhakhaatiirta hoggaaminaysay!
15 xilli ayaa la soo saaray wadar ahaan 331 dhacdooyin oo dhammaaday 2009 waxayna bilaabmeen 1994.
Waxaa lagu soo koobay mid ka mid ah taxanaha nooca oo leh abaalmarinnada ugu badan.
Taxanaha majaajilada oo socday 10 sano oo leh 10 xilli. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan abid! Nolol maalmeedka lixda saaxiib ee ugu fiican ayaa dib loo tiriyaa: Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross iyo Joey. Waxay ku nool yihiin Magaalada New York waxayna wadaagaan xiriir aad isugu dhow oo saaxiibtinimo dhab ah oo jaceylka jaceylka ah uu ka soo baxo. Waxay ku nool yihiin nooc kasta oo xaalado ah oo ku dhaca dadka caadiga ah: arrimaha jacaylka, wadne -gariirka, dhibaatooyinka shaqada, xaaladaha murugsan ee qoyska iyo safarada xiisaha leh, si aan u xuso dhawr tusaale. Dhammaantood waxay ku nool yihiin meel aad isugu dhow sidaas darteed dhammaantood waxay ku kulmaan kafateeriyada si joogto ah.
Taxanaha ayaa leh taabasho weyn oo majaajilo ah, inta badan Joey iyo Phoebe oo ka mid ah jilayaasha ugu qosolka badan ee qosolka ka badan.
Taxanahani wuxuu calaamadeeyay xirfadaha dhammaan jilayaasha, kuwaas oo shaqadooda ka sii watay shaashadda weyn oo, inta badan, sii ahaanaysa kuwo ansax ah.
Sabrina, alaabtii sixirka
Melissa Joan Hart oo ay jileyso aktarada waqtigaan jilaya Sabrina Spellman a Xirfadlaha saaxirka oo ku ogaada 16 jir in ay leedahay awoodo sixir. Waxay la nooshahay labadeeda eeddo, Hilda iyo Zelda oo noolaa in ka badan 600 oo sano sidoo kale waa saaxiriin. Waxay u haystaan ​​Salem sidii xayawaan rabaayad ah, bisad hadlaysa iyo saaxiibtinimo taxane ah. Bandhigu wuxuu bilaabmay 1996 -kii, qaybtiisii ​​ugu dambaysayna waxay hawada soo gashay 2003 -dii.
Sabrina waxay dhigataa dugsiga diyaarinta iyada oo ah gabar caadi ah waxayna sheekadu sheegeysaa sida ay nolosheeda u hormariso si ay u noqoto saaxir khabiir ah iyo qof weyn oo leh mas'uuliyado ka jira dunida dhabta ah halkaas oo ay u baahan tahay in ay awoodeeda ku ilaaliso. Qaar ka mid ah saddex -xagalka jaceylka ayaa soo ifbaxaya inta lagu jiro kulliyadda iyo dhammaadka taxanaha ayaa ka hadlaya arooska jilaaga.
Guud ahaan, dhacdo kasta waxay sheegtaa sheeko ka duwan taas oo aan toos ula xiriirin dhacdadii hore mid walbana waxaa ku jira nooc anshax. Waxay ahayd shaki la'aan mid ka mid ah taxanaha ugu xiisaha badan ee loo daawado dhallinta waqtigaas!
Waxay hawada ku jirtay muddo lix sano ah (1997-2003) oo leh toddoba xilli. Jilaaga caanka ah Buffy Summers, waxaa jilaya Sarah Michelle Gellar. Iyadu waa a dilaaga vampire -ka da'da yar ee isku daya inuu nolosheeda ugu noolaado sida ugu macquulsan ee "caadiga ah". Intii lagu guda jiray dhagarta oo dhan waxay aqbashaa qaddarkeeda iyada oo kaashaneysa feejignaan, waxay noqotaa dagaalyahan aan kala joogsi lahayn oo ka soo horjeeda xoogagga mugdiga.
Inta lagu jiro cutub kasta waa inaad la dagaallanto tiro badan oo vampires iyo jinniyo weerara aadanaha.
Qaar kale oo leh mowduucyo isku mid ah ayaa ka soo baxaya taxanahan, sida xaalkii Malaa'ig.
Dareenka Nolosha (90210)
Taxanaha ayaa la gudbiyay 10 sano (1990 ilaa 2000) oo markii hore laga sii daayay FOX ee Mareykanka, markii dambe waxay noqotay guul caalami ah. Taxanaha opera saabuunku wuxuu ku saabsan yahay vsafarka mudnaanta leh ee koox arday dugsi sare ah ee magaalada Beverly Hills. Xilligii ugu horreeyay wuxuu diiradda saaray nolosha walaalaha Walsh, markii dambe mawduucyada ayaa noqday kuwo si guud loogu soo koobay mawduucyada dhallinyarada.
Brandon, Brenda, Kelly, Steve, Donna iyo Nat ayaa qayb ka ah jilayaasha bandhigga muranka badan dhaliyay.
Waa a Taxanaha majaajilada oo jilaya jilaha magaca taxanaha ah. Isagu wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Ingiriiska cutubyaduna waxay ka koobnaayeen shirqoollo kala duwan, guud ahaan habdhaqanka Mr Bean wuxuu ku salaysnaa isgaarsiin leh calaamado guud ahaan.
Dhacdooyinka, dabeecadda iyo habka xallinta dhibaatooyinka jilaaga ayaa sameeya bandhig gaar ah oo aad u xiiso badan in la daawado!
Waxay socotay shan sano: laga bilaabo 1990 ilaa 1995 iyo markii dambe laba filim oo muuqaal ah ayaa la sii daayay 1997 iyo 2007.
Dhab ahaantii waa mid ka mid ah taxanaha ugu sarreeya ee lagu qiimeeyay tobankii sano ee la soo dhaafay! Qorraxda, ciidda, badda iyo badbaadiyeyaasha taallada leh ee xeebta ayaa ahaa soo jiidashada ugu weyn muddo 10 sano ah. Dhacdo kastaa waxay ka koobnayd tacaburro kala duwan oo dadka ku lug lahaa si ay u badbaadiyaan xaalado aad u murugsan.
Taxanihu wuxuu socday kow iyo toban xilli wuxuuna dhammaaday 2001.
Waxaa jilaya mataano isku mid ah Tia iyo Tamera Mowry, sheekadu waxay sheegaysaa sheekada laba gabdhood oo mataano ah ayaa kala tagay markay dhasheen. Labadaba waxaa korsaday waalidiin kala duwan waxayna mar kale kulmaan marka ay jiraan 14 sano. Dib -u -heshiisiinta lama filaanka ah ka dib, waxay sameeyaan qorshe ay ku wada noolaadaan ugu dambayntiina way kulmaan. Labaduba waxay leeyihiin shakhsiyad aad u kala duwan, taasoo ka dhigaysa dhacdo kasta mid aad u xiiso badan.
Wada -noolaanshaha ka dhexeeya waalidiinta korsada ayaa sidoo kale ah mid gaar ah.
Bandhigu wuxuu soo baxay 1994 ilaa 1999.
Qof walba wuxuu rabaa Raymond
Goobtu waxay ku taal a Qoyska Talyaani-Ameerika oo ka kooban waalidiin iyo saddex carruur ah. Waalidiinta Raymond, oo ah aabaha qoyska, ayaa ku nool waddada dhinaceeda. Markaa waxay noqdaan booqasho joogto ah oo marmar dhibsata oo dhalisa tiro badan oo xaalado majaajilo ah.
Guud ahaan, dulucda ugu weyni waa xiriirka lamaanaha iyo colaadaha ka dhex abuurmay jiilal kala duwan oo dad ah oo soo maray heerar kala duwan oo nolosha ah.
Waa mid ka mid ah taxanaha ugu abaal -marinta tobanka sano iyo mid si weyn kor ugu qaaday xirfadda Tim Allen.
Bandhigu wuxuu ka warramayaa nolosha a martigeliye telefishan oo mawduuciisu ugu weyn yahay barashada sida loo isticmaalo aaladda saxda ah si daawadayaashu ay keligood u hagaajin karaan guriga. Isla mar ahaantaana, jilaagu waa inuu wax ka qabtaa xaaska talada haya iyo saddex carruur ah oo abuura xaalado aad u qosol badan.
Taxanaha qarsoodiga khiyaaliga sayniska wuxuu ku saabsan yahay adduunyada dhulka dheeraadka ah iyo makhluuqyada la yaabka leh. Arrimahaas ku xeeran, faylal qarsoodi ah ayaa la abuuray oo baaritaan lagu sameeyay laba wakiil oo FBI ah: Mulder iyo Scully. Waxaa ka buuxa shaki, dhacdo kasta waxay ka sheekaynaysay kiisas qarsoodi ah oo kala duwan oo ka dhex abuuray daawadayaasha hubanti la'aan weyn.
Waxay hawada ku jirtay 9 sano iyada oo 61 abaalmarin la siiyay hay'ado kala duwan oo ay ka mid yihiin Emmy Awards iyo Golden Globes.Jariiradda Time ayaa ku dartay "The X Files" qiimeynta 100 taxanaha ugu fiican taariikhda.
Waxaa la soo saaray 1993 -kii waxayna dhashay 11 xilli oo dhammaaday 2004 -tii. Dr. Frasier waa daaweeye aad u guulaystay oo leh raadiyaha Seattle. Wuxuu la wadaagaa talooyinkiisa iyo fikradihiisa ugu wanaagsan dhagaystayaashiisa, haddana waa inuu wax ka qabtaa arrimaha noloshiisa.
Dhakhtarka cilminafsiga ee caanka ah ayaa kala taga oo aakhirkii la noolaada aabbihiis iyo eyga lagu magacaabo Eddie. Walaalkood oo murugsan ayaa si joogto ah u soo booqda.
Makhaayadda Café Nervosa waa mid ka mid ah meelaha ay aad u booqdaan jilayaasha iyo goobta wax -soo -saarka badan.
Fran Fine, jilaaga, waa haweeney asal ahaan ka soo jeedda Yuhuudda oo guri-guri ka iibisa waxyaabaha la isku qurxiyo ee magaalada New York. Shil ahaan waa cWaxaa lagula dhaqmay in uu noqdo ilaaliyaha saddex wiil oo ka tirsan dabaqadda sare wiilal carmal qurxoon oo lagu magacaabo Maxwell Sheffield, oo sidoo kale ah soo saare Broadway.
Dhacdo kastaa waxay muujineysaa taxane taxane ah oo Fran u baahan yahay inuu ku xaliyo taageerada saaxiibkeeda, Butler Niles. Hooyada xannaaneysa iyo ayeeyadeed ayaa ka mid ah jilayaasha ugu qosolka badan taxanaha.
Bandhiggu wuxuu socday muddo lix sano ah wuxuuna soo baxay filim muuqaal ah sannado ka dib markii uu dhammaaday.
Waxaan rajaynayaa in safarkan marku ahaa mid xiiso leh! Kaliya waxaad u baahan tahay inaad raadiso meheradaha saxda ah si aad mar labaad ugu raaxaysato waxaad u tixgeliso taxanaha telefishanka ugu fiican 90 -meeyadii.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Taxanaha TV -ga ugu wanaagsan 90 -maadkii
Aflaanta la daawado sida lamaane